သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်: သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၌တည်ရှိသည်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2021-03 > သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်
သင့်အသက်တာ၌ဘုရားသခင်မရှိကြောင်းသင်တစ်ခါတစ်ရံသင်ခံစားရသလော။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ကမင်းအတွက်အဲဒါကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသူများကသူတို့၏နေ့၌နေထိုင်သောခရစ်ယာန်များသည်ဘုရားသခင့်တည်ရှိမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားကြသည်ဟုအခိုင်အမာဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်သူကငါတို့အတွက်ဒီနေ့လား။ သို့ဆိုလျှင်သူမည်သို့ရှိနေသနည်း။ အဖြေသည်ယနေ့ခေတ်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်များနှင့်အစ၌ဘုရားသခင်သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ရှင်စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ကျိန်းဝပ်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံရသလော။ မဟုတ်ရင်အဲဒါကိုငါတို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲနိုင်လဲ။
သူ၏“ ဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်ရှိနေခြင်း” စာအုပ်တွင် Gordon D. Fee ကသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏သဘောသဘာဝနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အကြောင်းကျောင်းသားတစ် ဦး ၏မှတ်ချက်ကိုပြောပြသည် -“ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်အားလုံး ၀ အဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည်။ ဘုရားသခင့်သားတော်ကိုငါနားလည်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်ကငါ့အတွက်မီးခိုးရောင်၊ တောက်ပတဲ့မီးခိုးရောင်ပဲ” ဟုကျောင်းသားကဆိုသည်။ ဤကဲ့သို့မပြည့်စုံသောရှုထောင့်များသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သာဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေရှုပြောသည့်အတိုင်း၎င်းသည်လေနှင့်တူ။ မမြင်ရပါ။
ခရစ်ယာန်ပညာရှင်တစ်ဦးက "သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သဲထဲတွင် ခြေရာများကို မထားခဲ့ပါ။" ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံများက မမြင်နိုင်သောကြောင့်၊ ၎င်းကို အလွယ်တကူ လျစ်လျူရှုပြီး နားလည်မှုလွဲနိုင်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ယေရှုခရစ်အကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာသည် ခိုင်မာသောမြေပေါ်တွင် ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်သည် လူသားဖြစ်သည်၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် လူ့ဇာတိအဖြစ်ရှိတော်မူသောကြောင့်၊ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မျက်နှာထားရှိသည်။ သားတော်ဘုရားက ခမည်းတော်ဘုရားကို “မျက်နှာ” ပေးခဲ့တယ်။ ယေရှုကိုမြင်သောသူတို့သည် ခမည်းတော်ကိုလည်း မြင်နိုင်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုခဲ့သည်– “ဖိလိပ္ပု၊ ငါသည် သင်တို့နှင့်အတူရှိနေသည်မှာ ကြာပြီ။ ငါ့ကိုမြင်သောသူသည် အဘကိုမြင်၏။ အဘကို ငါတို့ကိုပြပါဟု မည်ကဲ့သို့ပြောသနည်း။ (ယော ၁4,9) ခမည်းတော်နှင့် သားတော် နှစ်ဦးစလုံးသည် ယနေ့ ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်စုံသော ခရစ်ယာန်များတွင် နေထိုင်ကြသည်။ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ခရစ်ယာန်များထံတွင် ရှိနေကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်တော်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပြီး ၎င်းကို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနည်းလမ်းဖြင့် တွေ့ကြုံခံစားလိုကြသည်။ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်၊ ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ နီးကပ်မှုကို ခံစားရပြီး သူ၏မေတ္တာကို အသုံးပြုရန် တန်ခိုးရှိသည်။
တမန်တော်များအတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အတိုင်ပင်ခံ သို့မဟုတ် နှစ်သိမ့်ပေးသူဖြစ်သည်။ သူသည် လိုအပ်ချိန် သို့မဟုတ် အားနည်းချိန်များတွင် ကူညီရန် ခေါ်ထားသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ “ထိုနည်းတူ ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အားနည်းချက်ကို ကူညီပေးသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် မှန်သည်အတိုင်း ဆုတောင်းရမည်ကို မသိသော်လည်း၊ ဝိညာဉ်တော်သည် ငါတို့အား နှုတ်မြွက်နိုင်သော ညည်းတွားခြင်းနှင့်တကွ ဆုတောင်းတော်မူ၏။” (ရောမ၊ 8,26).
သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်၏ ဦးဆောင်သူများသည် ဘုရားသခင်၏လူများဖြစ်သည်ဟု ပေါလုပြောခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင် ၏ သား သမီးများ ဖြစ်ကြ သည် ။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝသောဘုရား၏လူမျိုးသည် ဝိညာဏလွတ်လပ်စွာနေထိုင်နိုင်သည်။ အပြစ်ရှိသော သဘာဝတရား၏ ကျွန်မဖြစ်တော့ဘဲ၊ သင်သည် ဘုရားသခင်နှင့် စေ့ဆော်မှုပြုကာ စည်းလုံးညီညွတ်သော ဘဝသစ်တွင် နေထိုင်နေပါသည်။ “ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့အထဲ၌ ကျိန်းဝပ်သောကြောင့် သင်တို့သည် ဇာတိပကတိမဟုတ်၊ ခရစ်တော်၏ ဝိညာဉ်တော်မရှိသောသူမူကား၊ မိမိ၌မတည်။” (ရောမ၊ 8,9) ဤသည်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲလာသောအခါတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော အစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် သူတို့၏အလိုဆန္ဒများသည် ဤလောကမှ ဘုရားသခင်ထံ ဦးတည်သွားကြသည်။ ပေါလုဤသို့ပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့သည်– “လူ၏ကြင်နာမှုနှင့်မေတ္တာပေါ်ထွန်းလာသောအခါ၊ ငါတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား၌ပြုသောအကျင့်ကြောင့်မဟုတ်၊ ကရုဏာတော်နှင့်အညီ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ ဆေးကြောခြင်းနှင့် အသစ်တဖန်ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်းတို့ဖြင့် ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏။ "(တိတု 3,4စာ-၅)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မျက်မှောက်တော်သည် ပြောင်းလဲခြင်း၏အမှန်တရားဖြစ်သည် ။ ဝိညာဉ်မပါဘဲ၊ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ; ဝိညာဉ်ရေးအရ မွေးဖွားခြင်း မရှိပါ။ ဘုရားသခင်သည် ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်တော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ရည်ညွှန်းသည့် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ လူတစ်ဦးသည် အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသောအခါတွင်၊ ခရစ်တော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ၎င်းတို့၌ အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ထိုသို့သောလူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်သောကြောင့်၊ ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကို ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာ၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးနှင့်ရှိနေခြင်းကိုမည်သို့ရနိုင်သနည်း၊ ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသည်ဟုသိနိုင်ပါသနည်း။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသူများ၊ အထူးသဖြင့်ပေါလုသည်အရည်အချင်းသည်လူတစ် ဦး ၏လျှောက်လဲချက်အားတုံ့ပြန်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ မေတ္တာရပ်ခံချက်မှာယေရှုခရစ်၌ဘုရားသခင့်ကျေးဇူးတော်ကိုလက်ခံရန်၊ အတွေးဟောင်းကိုစွန့ ်၍ ဝိညာဉ်တော်၌အသက်ရှင်ရန်စတင်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်တော်၏ ဦးဆောင်မှု၊ ဝိညာဉ်တော်၌ ကျင်လည်ရန်၊ ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် အသက်ရှင်ရန် တွန်းအားပေးသင့်သည်။ ယင်းကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းများတွင် မူအရဖော်ပြထားသည်။ ခရစ်ယာန်များကို စိတ်ဝိညာဉ်နှင့် ဉာဏ်ဖြင့် အသစ်ပြုပြင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အသီးအနှံသစ်များ ပေါက်ဖွားရမည်– “ဝိညာဉ်တော်၏အသီးကား ချစ်ခြင်း၊ ရွှင်လန်းခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း၊ ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသော တရားမရှိ။” (ဂလာတိ၊ 5,22-23) ။
ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌နားလည်ထားသောဤအရည်အသွေးများသည်အယူအဆများ (သို့) ကောင်းသောအတွေးများထက်မပိုပါ။ သူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးသည့်အတိုင်းယုံကြည်သူများအတွင်းစစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးစွမ်းအားကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဒီအင်အားကိုအခြေအနေအားလုံးမှာသုံးဖို့စောင့်နေတယ်။
အကျင့်စာရိတ္တများကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးသောအခါသူတို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိကြောင်းကိုသက်သေပြသောအသီးများ (သို့) အထောက်အထားများဖြစ်လာသည်။ ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ခွန်အားဖြစ်လာစေရန်နည်းလမ်းမှာ ၀ ိညာဉ်တော်မြတ်၏တည်ရှိမှုအတွက်ဘုရားသခင်ထံတောင်းခံပြီးမှ၎င်းအားလမ်းညွှန်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝိညာဉ်တော်သည်ဘုရားသခင့်လူမျိုးကိုလမ်းညွှန်သည့်အခါဝိညာဉ်တော်သည်ဝိညာဉ်တော်နှင့်အညီနေထိုင်သောယုံကြည်သူတစ် ဦး ချင်းအားဖြင့်အသင်းတော်နှင့်၎င်း၏အဖွဲ့အစည်းများ၏ဘဝကိုအားကောင်းစေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်လူတို့၏အသက်တာ၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တက်ကြွသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အစီအစဉ်များ၊ အခမ်းအနားများသို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်များကဲ့သို့ချာ့ခ်ျဘဝကဏ္aspectsများကိုရောထွေးမသွားစေရန်သတိထားသင့်သည်။
ယုံကြည်သူများအတွင်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အလုပ်၏အရေးအကြီးဆုံးသောအထောက်အထားသို့မဟုတ်အရည်အသွေးမှာမေတ္တာဖြစ်သည်။ ဤအရည်အသွေးသည်ဘုရားသခင်မည်သူဖြစ်သနည်းဟူသောအနှစ်သာရကိုသတ်မှတ်ပြီးဝိညာဉ်တော် ဦး ဆောင်သောယုံကြည်သူများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ တမန်တော်ပေါလုနှင့်အခြားဓမ္မသစ်ကျမ်းဆရာများသည်ပထမနေရာတွင်အမြဲဂရုစိုက်ခဲ့သောဤချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တစ် ဦး ချင်းစီ၏သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်ပိုမိုခိုင်မာလာခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းရှိမရှိသူတို့သိချင်ကြသည်။
ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများ၊ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုနှင့်မှုတ်သွင်းခံသွန်သင်ချက်များသည်အသင်းတော်အတွက်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်ပေါလုအတွက်မူခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူများအတွင်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏တက်ကြွမှုသည် သာ၍ အရေးကြီးသည်။
ပေါလုက သူသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာစကားအားလုံးကို ပြောနိုင်လျှင် ကောင်းကင်တမန်များ၏ ဘာသာစကားကိုပင် ချစ်မြတ်နိုးခြင်းမရှိပါက၊ သူသည် သူ့အလိုလို ထွက်လာသော ခေါင်းလောင်း သို့မဟုတ် မောင်းသံ ဖြစ်လိမ့်မည် (1. ကောရိန္သု ၁3,1).
ပရောဖက်ပြုချက်ရှိလျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၏နက်နဲသောအရာအားလုံးကို သိ၏၊ အသိပညာရှိသမျှကို ပိုင်နိုင်၏၊ တောင်များကို ရွှေ့နိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိငြား၊ ချစ်ခြင်းမရှိဘဲ နေနေရလျှင် အကျိုးမရှိဟု သူနားလည်လာသည် (း၂)။ သမ္မာကျမ်းစာအသိပညာ၊ သီအိုရီဆိုင်ရာထုံးတမ်းစဉ်လာများ၊ သို့မဟုတ် ခိုင်မာသောခံယူချက်များသည် စွမ်းအားတော်၏မေတ္တာတော်ဖြင့် တန်ခိုးအာဏာကို အစားထိုးနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ရှင်ပေါလုက၊ ကျွန်ုပ်သည် ဆင်းရဲသားတို့အား မီးလျှံ၌ အသေခံကာ ဆင်းရဲသားတို့အား ပေးလှူသော်လည်း ချစ်ခြင်းမေတ္တာမရှိသော အသက်တာဖြင့် အသက်ရှင်လျှင် မည်သည့်အကျိုးအမြတ်မှ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဟု ပေါလုပင် ဆိုနိုင်သည်။ မိမိတို့အကျိုးအတွက် ကောင်းသောအကျင့်ကိုပင် မလုပ်ဘဲ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို မရောထွေးသင့်ပါ။
ယုံကြည်သူများသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တက်ကြွမှုရှိနေရန်နှင့် ၀ ိညာဉ်တော်အားတုံ့ပြန်ရန်အရေးကြီးသည်။ ခရစ်ယာန်စစ်များသည်ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောလူမျိုးများသည်အသစ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းနှင့်သူတို့၏ဘ ၀ ၌ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထင်ဟပ်ပြသရန်ပြောင်းလဲခြင်းများဖြစ်ကြောင်းပေါလုကအခိုင်အမာဆိုသည်။ ဤအသွင်ကူးပြောင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ဖြစ်ပျက်နိုင်သောနည်းလမ်းတစ်ခုသာရှိသည်။ ၎င်းသည် ဦး ဆောင်သောအသက်တာအားဖြင့်နေထိုင်သောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်နေထိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်သည်သင်၏နှလုံးသားနှင့်စိတ်၌ဘုရားသခင်၏ကိုယ်ပိုင်တည်ရှိမှုဖြစ်သည်။
Paul Kroll မှ